Home » Lahatsoratra farany farany » Hospitality Industry » Hevitra folo manandanja amin'ny fanarenana orinasa
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny indostrian'ny fandraisam-bahiny eropeana dia nanentana ny hitrandraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny asa aman-draharaha sy ny fampitomboana ny vola miditra mandritra sy ny valan'aretina
Ny mpanjifa B2B dia mila filàna sy finiavana ary vola be dia be handehanana ary hihaona indray
Ny olona miasa any an-trano dia mety ho lasa mpanjifa mandalo fialamboly
Ny areti-mandringana dia niteraka ny fandrosoan'ny fivoriana nomerika izay azo antoka fa hisy fiatraikany amin'ny dia ataon'ny orinasa
Mpitarika marika iraisam-pirenena maherin'ny 300 ao amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny eropeana no nomena fahitana sarobidy momba ny fomba hiomanana amin'ny fomba mihetsiketsika sy hamoahana ny fanarenana orinasa amin'ny 2021 sy ny sisa rehefa nanatrika ny HSMAI Europe Day 2021 izy ireo.
Ny fomba fijery ambony sy ny dingana manaraka ho an'ny indostria dia misy:
Fandaminana raharaham-barotra - atombohy izao ary mifantoha amin'ny fanarenana ny tsena anatiny amin'ny telovolana faha-2 amin'ny 2021
Manaova drafitra izao: zava-dehibe ny tsy hahajanona eo an-tsena ireo trano fandraisam-bahiny. Na dia mety miadana aza ny telovolana voalohany amin'ny 2021, dia mila manam-paharetana sy maharitra ny indostria, ka fotoana manankery hanaovana tsena ny asa aman-draharaha izao. Na dia mbola tsy fantatra aza ny fotoana fitsangatsanganana iraisampirenena, ny famoahana vaksiny dia midika fa ny famandrihana an-trano dia kasaina hitombo amin'ny telovolana faharoa sy fahatelo amin'ny 2021. Raha azo atao, ny trano fandraisam-bahiny dia tokony hijerena ny hisokatra hatrany ka ho vonona sy ho vonona amin'ny dingana voalohany amin'ny ny fanarenana. Ity ihany koa no mety hivarotana amin'ireo mpandeha ara-tontolo iainana / maitso izay laharam-pahamehana ny dia an-trano.
Miomàna amin'ny fangatahana famandrihana fialamboly manomboka amin'ny telovolana faha-3 amin'ny 2021
Ny fikarohana sy ny faminaniana naroson'i STR tamin'ny kaonferansa dia nanambara fa, amin'ity fahavaratra ity, ny indostria dia kasaina hahita fitsangatsanganana amin'ny famandrihana. Ny trano fandraisam-bahiny any amin'ny toerana fialan-tsasatra avo lenta dia antenaina hahomby tsara, noho izany dia zava-dehibe ny alohan'izy ireo amin'ny làlana marketing mba hanararaotana ireo mety ho vintana.
Ny fanovana fomba fanao asa dia midika fotoana vaovao ho an'ny orinasa hotely
Mihabetsaka ny orinasa, amin'ny habe rehetra, no antenaina hiasa ao an-trano na dia aorianan'ny areti-mandringana aza, saingy matetika dia ilaina ny mihaona mifanatrika amin'ny fivorian'ny mpiasa sy ny mpanjifa ary koa ny fiaraha-mikorana - tokony hizaha fomba vaovao ny trano fandraisam-bahiny. hivarotra sy hanakarambola raha jerena ny fomba fanao asa miova.
Mifantoha amin'ny fangatahana mialoha ny fandraharahana SME eo amin'ny sehatry ny famandrihana Group / MICE
Ny famandrihana orinasa dia kasaina hiverina amin'ny Quarter 4 amin'ny 2021 / ny fiandohan'ny 2022. Ny fifanakalozan-kevitra amin'ny Andron'ny HSMAI Europe Day dia mifantoka amin'ny fomba mety hisian'ny orinasa SME ho tsena izay ho tafarina aloha. Ity fangatahana ity dia azo ampirisihina amin'ny alàlan'ny fampiharana ny mavitrika fa tsy ny tahan'ny raikitra.
Mifantoha amin'ny tahan'ny miovaova arakaraky ny toetrandro, ampiarahana amin'ny paikady fizarana manan-kery
Noho ny fisalasalana amin'ny toetr'andro ankehitriny, ny hotely dia mila manaiky fa ny mpanjifa dia mila manome toky ny tahan'ny miovaova ary ity fironana ity dia mety hiroso amin'ny 2022. Raha mbola ny vidin'ny vahiny no resahina, ny fahalalahana no olana lehibe indrindra. Ny fampiharana paikady fizarana izay manatsara ny fampiasana ny tranokalan'ny marika, OTAs, ary fantsona fizarana hafa, dia ho fanalahidin'ny fanarenana haingana. Ny trano fandraisam-bahiny dia tokony handinika ny sakany amin'ny fantsom-pizarana (ankoatry ny tranokalan'ny marika) satria ny mpanjifa dia avara-pianarana amin'ny lafiny sanda sy fantsona / sehatra metasearch. "
Mijanona eo an-tampon'ny fanovana nomerika sy ny angon-drakitra mba hampitomboana ny famandrihana sy hanatsara ny traikefan'ny mpanjifa
Mihabetsaka ny mpanjifa amin'ny hotely no mirotsaka an-tserasera ary manantena ny fahatsorana sy ny fampiasana azy ireo rehefa mitady sy manao famandrihana. Ny trano fandraisam-bahiny dia mila miantoka ny famolavolana ny traikefan'ny mpampiasa dia tsy mifanaraka amin'ny fepetra takiana - tsy ho an'ny mpanjifa ihany fa ho an'ny ekipa fandraisam-bahiny manokana. Zava-dehibe ho an'ny ekipa mpivarotra sy marketing ny trano fandraisam-bahiny hanaiky ny maha-zava-dehibe ny fanangonana angon-drakitra amin'ny teboka samihafa amin'ny dian'ny mpanjifa mba hahafahany manolotra traikefa manokana an'ny mpanjifa.
Miomàna hampifanaraka sy hanavao ireo programa momba ny tsy fivadihana
Ny indostria dia mila mandinika ny fomba ahafahany manavao sy manatsara ny tsy fivadihana amin'ireo programa efa misy. Ny trano fandraisam-bahiny dia mety te handinika ny firosoana amin'ny varotra manerantany sy isam-paritra mankany amin'ny fandraisana andraikitra eo an-toerana ary manome tolo-kevitra mifandraika amin'izany sy fandraisana andraikitra traikefa amin'ny fifantohana amin'ny eo an-toerana. Na dia maro aza ny mpanjifa tsy afaka mandeha lavitra amin'ny toetrandro ankehitriny, dia mbola maniry ny zavatra niainany nitety tany voalohany ihany izy ireo. Tandremo fa ny mpikambana mahatoky dia mahatoky amin'ny programa sy sehatra maro. Ny fanamoriana manokana ny vahinin'ny vahiny dia manakiana ny fanovana sy ny fananganana tsy fivadihana ary ny fifandraisana misy eo amin'ny mpikambana sy ny hotely. Ny tena tsy miova dia ny tsy fivadihana mitohy mivoatra eto amin'ity tontolontsika mandehandeha miovaova ity. Ny dingana voalohany dia ny fahafantarana hoe iza ireo vondrona mpitety faritany vaovao sy ny maha-zava-dehibe ny fahafantarana azy ireo akaiky ny trano. Farany dia ny tena izy, ny fifandraisana tsy tapaka ary ny mangarahara amin'izy ireo. ”
Diniho ny KPI vaovao hanamarihana ireo compitsanao marobe
Ny foto-kevitry ny foto-kevitra KPI tokana dia efa lany andro ary ny trano fandraisam-bahiny dia tokony hijery KPI marobe ao anatin'izany ny trano fandraisam-bahiny, toeram-ponenana hafa sy ny sehatry ny rindrambaiko. Ny trano fandraisam-bahiny dia tokony handinika ny fanombanana ny fananany / fananany miaraka amin'ireo mpifaninana aminy, amin'ny fampiasana metatra toa ny GOPAR, ary ny fizarana. Ny metrikan'ny faharetana dia ho zava-dehibe kokoa ho an'ny trano fandraisam-bahiny raha oharina amin'ny fitsanganan'ny mpandeha tontolo iainana.
9. Karakarao ireo mpiara-miasa aminao (taloha), sy ireo matihanina zandriny amin'ny indostrianay
Ny fiarovana ny kolontsain'ny orinasa sy ny fahasalaman'ny mpiara-miasa dia tsy zava-dehibe velively. Afaka taona vitsivitsy dia hiverina hiverina amin'ilay areti-mandringana ny olona ary hahatadidy ny fomba niatrehan'ny marika hotely ireo fanamby. Ohatra, ny vahiny dia mety hanontany hoe: "Mbola mifandray amin'ny olona tokony hiala ve ianao?" Manome fotoana hiatrehana ny adin-tsaina mety hitranga ve ianao? ” “Manohana ireo tanora nahazo diplaoma mitady hiditra ao amin'ny indostria ve ianao, na dia tsy afaka manome azy ireo asa amin'izao fotoana izao aza?” Ny valin'ireto fanontaniana ireto dia hampiseho fa zava-dehibe.
10. Ny mpanjifa B2B dia mila filàna sy finiavana ary vola be dia be handehanana ary hihaona indray
Covid-19 vaksininy sy fanalefahana ny fameperana dia handrisika ny fanarenana orinasa. Ny areti-mandringana dia nahatonga ny fandrosoana haingana amin'ny fivoriana niomerika izay misy fiatraikany amin'ny fivezivezena ataon'ny orinasa, nefa koa manokatra fotoana isan-karazany amin'ny asa aman-draharaha toa ireo orinasa izay hampiasa birao an-trano ihany ary hampiasa hotely ho ivon-kevitry ny fifanakalozan-kevitra ataon'ny mpiasa sy ny fananganana kolontsaina.